Sumadda CBD • Dawooyinka Inc.eu
Waxyaabaha caanka ah ee alaabooyinka leh cannabidiol (CBD) ayaa si aad ah kor ugu kacay sannadihii la soo dhaafay. CBD waa cilmi-nafsi-laawe cannabinoid ah oo laga helo dhirta xashiishka oo laga soo saaro caleemaha iyo ubaxyada dusha sare ee faleebada. Maalmahan, badeecooyinka ay ku jiraan CBD waxaa laga heli karaa ku dhowaad dukaammo kasta iyo bakhaarka cuntada caafimaadka, laga bilaabo nafaqada, sida saliidda CBD iyo kaabsoosha, ilaa waxyaabaha la isku qurxiyo. Alaabtaan waxaa loo adeegsadaa nooc kasta oo cabashooyin ah, oo ay ka mid yihiin hurdo la'aan ilaa cambaar iyo laga bilaabo ADHD ilaa joojinta sigaar cabista.
In kasta oo alaabada ay kujirto CBD ay aad u caan baxday muddo yar gudaheed, si dhib yar weligood looma kormeero. Sababta oo ah ma jiro halbeeg sharci oo go'an, tayada badeecada leh CBD aad ayey u kala duwan tahay. Xaaladaha badankood, macaamiisha wax fikrad ah kama qabaan waxa ay cunayaan.
Markii la codsado, Hay'adda Badbaadada Cuntada iyo Macaamiisha NSA (NVWA) iyo Baarayaasha Caafimaadka iyo Kormeerka Dhallinyarada (IGJ) waxay sheegaan inaysan kormeeraynin alaabtan, oo ay ku shaqeeyaan labadaba tusi kormeeraha kale inuu yahay mas'uulka mas'uul ka ah. Sidaa darteed ma cadda in qof kormeerayo alaabtan iyo, haddii ay sidaas tahay, yaa. Xaqiiqdii, tani waa lama-huraan ku tahay waddan la nidaamiyay sida Nederland, gaar ahaan marka la eego sumcadda alaabooyinkaan. Dowladda, oo qayb ahaan mas'uul ka ah amniga dhammaan badeecadaha lagu iibiyo Netherlands, ayaa ku guuldareysata, gaar ahaan hadda soo saarista iyo alaabada kale ee cannabinoids EU-da ayaa loo arkaa inay tahay cunno cusub ilaa iyo Janaayo 2019 maxaa yeelay taariikh isticmaal aamin ah lama soo bandhigin.
Buugga macluumaadka cuntada
Meelaynta dusha Buugga cuntada ee buugga 'Novel' ee Midowga Yurub waxay ka dhigan tahay in oggolaansho suuq loo baahan yahay iyo in badeecooyinka aan si fudud mar dambe suuqa lagu dhigi karin. Ku meeleynta buugga "cuntada cusub" ma ahan sharci ahaan mid waajib ku ah, laakiin waxay yeelan kartaa cawaaqib xumo. Maamulada dalal kala duwan oo ka tirsan Midowga Yurub waxay buuggan u isticmaalaan hage tilmaame u ah dejinta iyo dhaqan gelinta xeerarka. Iyada oo ku saleysan aasaaskan, iibinta alaabada ay ku jirto CBD xitaa gebi ahaanba waa laga mamnuucay wadamada Yurub qaarkood. Mawqifka dowladda Nederland ee ku aaddan alaabooyinka ay ku jiraan cannabinoids weli ma cadda. Waqtigaan la joogo, Wasaaradda Caafimaadka, Daryeelka iyo Isboortiga iyo NVWA waxay qireen isbeddelka ku jira buugga "cuntada cusub", laakiin ma aysan ku lifaaqin wax cawaaqib ah. Hadal qoraal ah Mas’uuliyiinta waxay cadeeyeen bishii Maarso 2019 in:
"Waqtigaan la joogo waxaan ka fiirsaneynaa talaabooyinka u baahan in la qaado, sidaa darteed nasiib daro kama hadli karno tan waqtigan."
Waxbadan isma bedelin ilaa markaas. Dawladdu uma muuqato inay waddo wanaagsan ku leedahay alaabadaasi. Mamnuuciddu ma aha ikhtiyaar, sababtoo ah CBD sida laga soo xigtay WHO malahan astaamo naafanimo mana leh wax fursad ah oo loogu talagalay ku xadgudubka ama ku tiirsanaanta sharciyeyntana way adag tahay. Ilaa iyo inta aysan jirin wax buuq ah ama dhacdo, majirto wax dan ah oo siyaasadeed oo mowduuca hadana si xasiloon ayay u sii aamusnaan tahay. Xaqiiqda ah in dawladdu suuqa ka tagto iyada oo aan la hubin iyo in ilaalinta macaamiisha aan lagu soo darin ayaa muuqata inaysan ahayn arin.
Sababta oo ah shaki la’aanta joogtada ah awgeed, qayb kamid ah suuqa ayaa go’aansatay inay la wareegto. Tan soo socota, waxay leedahay Cannabinoids Consultancy Netherlands (CAN) ayaa bilaabay calaamad shahaado oo loogu talagalay alaabada CBD usbuucii hore. Haddii sheygu leeyahay calaamaddan tayada leh, tayada badeecadani waxay la jaan qaadi doontaa halbeeg warshadeed oo ku saleysan tilmaamaha EU-da ee cuntada kaabista ah. Badeecad sidata calaamaddan tayada ayaa sidoo kale si buuxda looga raadsan karaa farcanka. Faahfaahinta badeecad kasta ayaa dhowaan loo heli doonaa macaamiisha iyada oo loo marayo degel gooni ah.
Dhanka kale, soo saareyaal kala duwan iyo iibiya alaabada CBD ayaa cadeeyay inay dalbadeen calaamadda tayada. Astaamaha tayada, waxay CAN dooneysaa inay tusto macaamiisha, dowladda iyo bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka in alaabada CBD ay noqon karaan kuwo tayo wanaagsan oo la isku halleyn karo. Waa wax fiican in waaxda lafteeda ay qaadato mas'uuliyadda oo ay bilowdo calaamad tayo leh. Tayada, amniga iyo raad ku haynta silsiladda wax soo saarka oo dhami waa shuruudo muhiim u ah badeecad kasta waxayna u siisaa macaamiisha hubaasha lagama maarmaanka ah. Dowladdu waa in ay amaaneysaa dadaalkan oo ay raacdaa sumadda tayada leh. Nasiib darrose, mar labaad ayay dhego beelidaa. Isla markii ay jiraan wax wanaagsan oo laga soo sheego xashiishadda cannabis, sida muuqata ma oga sida looga jawaabayo Wasaaradda Caafimaadka, Daryeelka iyo Cayaaraha. Fursad la waayey, illaa inta aan kahadlayo.
CBDsaliid cbdcaafimaadkashaabad oggolaanshahaKHLANederland
Halista iyo xaqiiqda: tani waa waxa cilmibaadhista hadda lagu sameeyay ee 'CBD' uu noo sheegayo
Marka laga hadlayo CBD, laga yaabee khatarta ugu weyn ee caafimaad ee macaamiisha inay tahay la'aanta ...
Hawaii - Cannabis ayaa si sii kordheysa loogu aqbalaa daawo ahaan adduunka oo dhan. Taasi waa sababta ay u jirto furfurnaan badan oo ku saabsan ...
Sigaar cabiddu ma hagaajin kartaa tababarkaaga iyo tababarkaaga?
Waxaa jira tartamo lagugu dhiirigelinayo inaad ka wado "sare" iyo jimicsi California ...